Wonke amawebhusayithi, ama-routers, ne-Laptop anekheli le-IP 192.168.8.10. Yileyo ndlela amaComputer abonwa ngayo wedwa enetheni noma kunethiwekhi. Imvamisa, i-router yakho inikezela eyodwa kwiLaptop kunethiwekhi yendawo. Iqinisekisa kanjani ukuthi ikheli le-IP kwi-PC yendawo alifani ncamashi nenetha? Ukusetshenziswa komuntu siqu kukhona irekhodi lezinombolo ezihlukanisiwe (ibhizinisi, indawo yokusebenzela, ikhaya, njll.) Lezi azikaze ziqashelwe iwebhusayithi yomphakathi.
Ikheli le-IP 192.168.8.10 ikheli le-IP eliyimfihlo. Amakheli e-IP ayimfihlo ngaphakathi asetshenziswa njengamanethiwekhi endawo ye-LAN (LAN) futhi awakhonjiswa enetheni. Amakheli we-IP ayimfihlo achazwa ku-RFC (IPv6) 4193 noma i-RFC (IPv4) 1918.
I-192.168.8.10 iyi-IP ekhethekile egcinelwe ukuthola ama-routers admin console. Lokhu kanye nama-IPs ahlukahlukene ngokwesibonelo 192.168.8.200, 192.168.8.1, 192.168.0.35, njll. Kuyizindlela ezamukelwa emhlabeni jikelele zezinqubo ze-router IPs. Kumanothi ibize nokuthi "Okuzenzakalelayo IP Gateway". Akuwona wonke ama-routers afana. Ngokwengeziwe, kunezinye izindlela phakathi kwamamodeli amaningana amafemu afanayo. Lawa mabhizinisi njengokungena kwe-IP asebenzisa i-192.168.8.10.
Ikheli le-IP le-192.168.8.10 ngokulandelana kwe-192.168.8.1 kuze kube ngu-192.168.8.255. Lesi sikali sekheli esisetshenziswa kumanethiwekhi asendaweni i-router izohlukaniswa kuwo wonke amadivayisi (ama-laptops, i-pad, i-Home Computer, izingcingo ezihamba phambili, njll.) Ngomshini wenethiwekhi yasekhaya.
The https://192.168.8.10 Ikheli le-IP lijoyinwa yi-Internet Apportioned Numbers Authority njengengxenye yamanethiwekhi avinjiwe we-192.168.8.0/24. Amakheli e-IP esikhaleni esisodwa awavunyelwe ezinhlanganweni ezimbalwa futhi noma ngubani angasebenzisa amakheli e-IP ngaphandle kokuvunyelwa ihhovisi lerejista ye-Intanethi lasekhaya njengoba libhalwe i-RFC 1918, ngokungafani namakheli we-IP abiwe.
I-IP 192.168.8.1 kuze kube ngu-192.168.8.255 ibanga yonke indawo lapho i-IP 192.168.8.10 iyingxenye yebanga le-IP elizimele eliqinisekisa amazinga asethwe ngaphambilini ne-RFC 1918. Amakheli esibonelo 192.168.8.10 awamukelwa kwi-Intanethi eyabiwe. Uma inethiwekhi yangasese idinga ukuxhumanisa nge-inthanethi, kufanele isebenzise njengendlela yokungena noma iseva engena esikhundleni.
Kungani ikheli njenge- 192.168.8.10 lijwayelekile?
Ngokwelulekwa, ikheli le-IP 192.168.8.10 liyisigaba samanethiwekhi akhethekile akwa-C. Ukulandelana kwalawa manethiwekhi kungu-192.168.0.0 kuze kube ngu-192.168.255.255. Lokhu kwenza amakheli e-IP ambalwa kakhulu angama-65,535. Lokhu kunwetshwa kuvame ukusetshenziswa kumanethiwekhi angasese njengoba ama-routers ahlukahlukene ehloselwe ngo-192.168.1.1, 192.168.8.1, noma ngo-192.168.0.1, njengamakheli azenzakalelayo.
Uma uxhuma kunethiwekhi nefoni, noma ama-laptops, amaphilisi, uthola ikheli le-IP ngokwesibonelo 192.168.8.10 ekulesi simo.
Yonke imizila iyangeneka ngesiphequluli. Qopha https://192.168.8.10 esipheqululini uma i-IP address router ingu-192.168.8.10. Uzobona ikhasi eliyisiqalo lokungena ngemvume. Ama-PW kanye namagama asetshenziswa kakhulu yile: “1234” admin noma “nil”. Sicela uqinisekise ngenxa yamarekhodi e-router.
Uma i-192.168.8.10 kungeyona i-IP router, ungabuyisa i-IP router ngomyalo we-Ipconfig. Ukubuyisa ikhasi lakho le-admin, ungasebenzisa ikhasi eliyisiqalo lomlawuli ngokungena esikimini sekheli lesiphequluli sewebhu futhi ungaqinisekisa ukhiye wokungena.